IMEX waxay ku bixisaa wada hadal wadajir ah qaab cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » IMEX waxay ku bixisaa wada hadal wadajir ah qaab cusub
Jebinta Wararka Mareykanka • Safarka Ganacsiga • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Aynu Ka Hadalno Maalmaha BuzzHub waxay sahmin doontaa waaritaanka, qaabeynta dhacdooyinka, kala duwanaanta, iyo caafimaadka maskaxda qaab cusub oo cusub.
IMEX BuzzHub waxay sii wadaa inay bixiso qaabab cusub oo xiiso leh oo ah barashada iyo iskuxirka kulamada wareega.
Maalmaha Cusub Aan Wadahadalno waxay bilaaban doonaan Juun 16, 2021, Ingiriis iyo Juun 23, 2021, Jarmal.
Dhacdooyinkan is-dhexgalka iyo dhiirrigelinta leh ayaa ballan qaadaya wada-hadal wadajir ah qaab cusub.
Booqdeyaasha BuzzHub waxay filan karaan taxane yar oo kal-fadhiyo wareegsan ah oo bixiya hab isdhaxgal iyo dhiirigalin ah oo loogu talagalay sahaminta mowduuca dib u soo kabashada ganacsiga, iyadoo si qoto dheer loo fiirinayo joogtaynta, qaabeynta dhacdooyinka, kala duwanaanta, caafimaadka maskaxda iyo horumarka xirfadeed.
Tan waxaa ku jira wada hadal furan oo ku saabsan naqshadeynta munaasabadda ee u dhexeeya Ruud Janssen iyo Roel Frissen oo ka socda Isku-duwaha Naqshadaynta Dhacdada iyo milkiilaha munaasabadda Joël Letang oo ka socda Wikimedia Foundation. Wadajir waxay wax uga qabtaan su'aasha: Sideen u qaabeyn karnaa dhacdooyin cusub oo cusub mustaqbalka? Maxaa macquul ah, maxaa khiyaali ah?
Ruud Janssen, Isuduwaha Abaabulka Dhacdooyinka Wadajirka ah
Joel Letang, Maamulaha Kooxda Dhacdooyinka, Wikimedia Foundation
Qaadashada dariiqa waara ee dib u dhiska sifiican ayaa ah mudnaanta koowaad ee dhamaan dhacdooyinka ganacsiga, kooxda ka socota Kobanheegan waxay wadaagaan khibradooda CVB. Lene Corgan iyo Cathrine Seidel Tvede oo ka socda Wonderful Copenhagen ayaa soo bandhigaya qorshahooda soo kabashada ganacsiga ee kobaca dhaqaalaha, taageerada bulshada iyo ku guuleysiga deegaanka ee Dib-u-dhiskaaga Si Fiican uga dhis aragtida magaalooyinka Soo kabashada waarta - Maxay ku qaadataa?
Lene Corgan, Madaxa Horumarinta Ganacsiga - Dhacdooyinka Ganacsiga ee Cajiibka Kobanheegan
Patrick Delaney, Agaasimaha Maamulka ee SoolNua, wuxuu la wadaagayaa aragtida dhiirrigelinta mawduuca kulul ee joogtaynta Tilmaamaha SITE Sustainability - waxay diiradda saareen dhiirigelinta.
Labada IMEX BuzzHub Aynu Wada Hadalno Maalmaha sidoo kale waxaa ku jira fadhiyo loogu talagalay in lagu taageero caafimaadka maskaxda ee ka soo qayb galayaasha; fayo qabka iyo jir dhiska oo lagu daray dhisida jaaliyadaha taageera jiilka soo socda ee hogaamiyaasha dumarka.
Kuwa ku soo biiraya Aynu Wadahadalno Maalinta 16 Juun waxay fursad u heli doonaan inay sahamiyaan barxad isku xirnaan cusub oo lagu magacaabo GatherTown. Kooxda IMEX waxay ku martiqaadeysaa kaqeybgalayaasha inay isku dayaan, iyagoo ku daraya jadwalkooda internetka ku yaal BuzzHub, oo soo gudbi jawaab celin ka hor intaan lala wadaagin bulshada dhacdada ballaaran ee ganacsiga.
Carina Bauer, oo ah agaasimaha guud ee kooxda IMEX, ayaa sharraxaad ka bixisay: “Dib u dhiska si wanaagsan waa waxa ay bulshadeennu u baahan tahay inay hadda sameyso, laakiin waxaa lagu gaari karaa oo keliya iskaashi dhab ah. Tani waxay ka imaaneysaa kaliya dhageysiga khabiirada laakiin la falgalka iyo la wadaagida fikradahaaga iyaga oo la wadaagaya wadashaqeyn dhab ah.
Ujeeddadeennu waa in Maalmahan cusub ee aynu wada hadalno ay noqdaan barxad wadahadal furan iyo fikrado cusub oo dhexmara kooxo yar yar oo xirfadlayaal dhacdooyin ganacsi ah, taas oo dhabaha u xaaraysa goorta aan shaqsi ahaan ugu kulmi karno IMEX America. ”
Aynu Wada Hadalno Maalmaha ayaa ka dhacaya barnaamijka cusub ee IMEX ee BuzzHub 16 Juun, iyo luqadda Jarmalka oo keliya 23 Juun.
IMEX BuzzHub wuxuu soconayaa illaa Sebtember isagoo keenaya isku xirnaanta aadanaha, qiimaha ganacsiga iyo waxyaabaha loo habeeyay 'Wadada Mandalay Bay' ee ku aaddan IMEX America, Noofambar 9-11, iyo Smart Monday, oo ay ku shaqeyneyso MPI Noofambar 8.
Diiwaangelinta waayo BuzzHub waa lacag la’aan.